Nchegbu—Nsogbu “Na-akpagide Anyị n’Ụzọ Niile” (2 Ndị Kọrịnt 4:8)
GỤỌ NKE Abua Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ June kwuru, sị: “Mgbe mụ na di m biri afọ iri abụọ na ise, anyị gbara alụkwaghịm. Ụmụ m pụrụ n’ọgbakọ. Ọtụtụ ọrịa ọjọọ bidoro rịawa m. Ihe a niile mere ka obi daa m mbà. Ọ dị m ka ụwa m ọ̀ gwụla, dịkwa m ka mụ agaghị edili nsogbu na-abịara m. Akwụsịrị m ịga ọmụmụ ihe, kwụsịkwa iso ọgbakọ eme ihe ọ bụla ha na-eme.”
O NWEGHỊ onye na-anaghị echegbu onwe ya mgbe ụfọdụ, ma ndị Chineke. Otu ọbụ abụ dere, sị: “M nwere ọtụtụ nchegbu n’ime obi m.” (Abụ Ọma 94:19) Jizọs kwụkwara na n’oge ikpeazụ, “nchegbu nke ndụ” nwere ike ime ka o siere mmadụ ike ife Jehova. (Luk 21:34) Oleekwanụ maka gịnwa? Ụkọ ego, nsogbu ezinụlọ, ma ọ bụ ọrịa ọ̀ na-eme ka ike ụwa gwụ gị? Olee otú Jehova nwere ike isi nyere gị aka?
“Ike Karịrị Ike Nkịtị”
Anyị agaghị ejili aka anyị kwụsị ịna-echegbu onwe anyị. Pọl onyeozi kwuru na “a na-akpagide anyị n’ụzọ niile.” Ọ sịkwara na “anyị na-enwe mgbagwoju anya” nakwa na “a na-akwada anyị.” Ma, o kwukwara na “a kpagideghị anyị nke na anyị enweghị ike imegharị ahụ́,” nke na anyị ‘enwetụghị ụzọ mgbapụ.’ Ihe ọzọ o kwuru bụ na “a dịghị ebibi anyị.” Gịnị na-enyere anyị aka idi nsogbu ndị na-abịara anyị? Ọ bụ “ike karịrị ike nkịtị,” ya bụ, ike si n’aka Jehova Chineke anyị, bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.—2 Ndị Kọrịnt 4:7-9.
Chegodị echiche otú Chineke si nye gị “ike karịrị ike nkịtị” n’oge gara aga. Ò nwere okwu i chetara e kwuru n’ọmụmụ ihe ma ọ bụ ná mgbakọ nke gbara gị ume ma mee ka obi sikwuo gị ike na Jehova hụrụ gị n’anya? Ọ̀ kwa ọ na-abụ ị kọwara ndị mmadụ banyere paradaịs Jehova kwere anyị ná nkwa, obi ana-esikwu gị ike na Jehova ga-emezu nkwa ndị o kwere? Anyị gaa ọmụmụ ihe ma ọ bụ kọọrọ ndị ọzọ ihe anyị kweere, anyị na-enweta ume anyị ji edi nsogbu anyị, obi na-erukwa anyị ala, anyị enwee ike iji obi ụtọ na-efe Jehova.
‘Detụ Jehova Ire ma Hụ na Ọ Dị Mma’
Nke bụ́ eziokwu bụ na i nwere ike iche na nsogbu gị akala nkụ. Dị ka ihe atụ, Jehova gwara anyị ka anyị buru ụzọ na-achọ Alaeze ya nakwa ka anyị jiri ihe ọ bụla gbasara ofufe ya kpọrọ ihe. (Matiu 6:33; Luk 13:24) Ma, ọ bụrụkwanụ na mkpagbu, ọrịa, ma ọ bụ nsogbu ndị dị n’ezinụlọ unu emeela ka ime ihe ndị a na-esiri gị ike, meekwa ka ike gwụ gị, nke na i nweghịzi ike iso ọgbakọ na-eme ihe ndị ha na-eme? Ọ bụrụ na ọtụtụ ihe ezuo gị ahụ́ otú a, o nwere ike ịdị gị ka o nweghịzi ihe ị ga-emeli. O nwedịrị ike ịbụ na o nweela mgbe ọ dị gị ka Jehova ọ̀ na-atụ anya ka i mee ihe ị na-agaghị emeli.
Ma, Jehova ma otú ike anyị hà. Ọ naghị atụ anya ka anyị mee ihe anyị na-agaghị emeli. Ọ ma na ọ bụrụ na nsogbu ezuo anyị ahụ́, ọ na-ewetụ oge tupu anyị enweta onwe anyị.—Abụ Ọma 103:13, 14.
Dị ka ihe atụ, legodị otú Jehova si lekọta Ịlaịja onye amụma. Mgbe Ịlaịja gbagara n’ala ịkpa n’ihi na ọ dara mbà n’obi, ụjọ ana-atụkwa ya na a ga-egbu ya, Jehova ọ̀ baara ya mba ma nye ya iwu ka ọ laghachi gaa buwe amụma? Mba. Jehova zigara mmụọ ozi ya ugboro abụọ ka o jiri nwayọọ kpọtee Ịlaịja n’ụra ma nye ya nri ka o rie. N’agbanyeghị ihe a Jehova meere Ịlaịja, mgbe abalị iri anọ gara, Ịlaịja ka nọkwa na-echegbu onwe ya ma na-atụ ụjọ. Olee ihe ọzọ Jehova meere ya iji nyere ya aka? Ihe mbụ Jehova mere bụ igosi ya na ya ga-echebeli ya. Ihe nke abụọ Jehova mere bụ na o ji “olu dị ala, nke dịkwa nwayọọ” gwa Ịlaịja okwu. Jehova mechara gwa Ịlaịja na e nwere ọtụtụ puku ndị ọzọ ji obi ha niile na-efe Chineke n’Izrel. Ihe a mere ka Ịlaịja jiri obi ike buwekwa amụma. (1 Ndị Eze 19:1-19) Gịnị ka ihe a na-akụziri anyị? Jehova ji ndidi na ọmịiko lekọta Ịlaịja mgbe nsogbu mere ka ọ na-echegbu onwe ya. Jehova agbanwebeghị. Ọ ga-elekọtakwa anyị otú ahụ o lekọtara Ịlaịja.
I mewe atụmatụ ihe ị ga-eme n’ozi Jehova, ekpebila ime ihe ị ma na ị gaghị emeli. Ejila ihe ị na-emebu n’oge gara aga atụnyere ihe i nwere ike ime ugbu a. Iji maa atụ, ọ bụrụ na onye na-agba ọsọ n’egwuregwu asọmpi akwụsị ịgba ọsọ ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ afọ, ike ya ga-ebelata. Onye ahụ chọọ ịmaliteghachi ịgba ọsọ, ọ gaghị ebido ozugbo gbawa ọsọ otú ọ na-agbabu. Kama ọ ga-ekpebi otú ọ ga-esi na-agbatụ ọsọ obere obere ka o nwetaghachikwa ume ahụ o ji agba ọsọ na mbụ. Otú ahụ ka ọ dịkwa Ndị Kraịst taa. Ha na-ekpebi ihe ndị ha ga na-eme iji nwee ike ịnọgide na-agba ọsọ ndụ. (1 Ndị Kọrịnt 9:24-27) Ọ́ gaghị adị mma ma i kpebie imewe otu ihe ga-akacha adịrị gị mfe omume n’ofufe Jehova? Dị ka ihe atụ, i nwere ike ikpebi ibido gawa ọmụmụ ihe. Rịọ Jehova ka o nyere gị aka ka i mee ihe a ị chọrọ ime. Ka ụkwụ ji nwayọọ nwayọọ na-esighachi gị ike n’ọgbakọ, ị ‘ga-edetụ Jehova ire ma hụ na ọ dị mma.’ (Abụ Ọma 34:8) Cheta na Jehova ji ihe ọ bụla i mere iji gosi na ị hụrụ ya n’anya kpọrọ ihe, ọ sọgodị ya ya bụrụ obere ihe.—Luk 21:1-4.
Ọ naghị atụ anya ka anyị mee ihe anyị na-agaghị emeli
“Ihe M Na-eche Kemgbe Ka O Nyere M Aka Ibidokwa Fewe Jehova”
Olee otú Jehova si nyere June anyị kwuru okwu ya ná mmalite aka ịlọghachikwute ya? June kwuru, sị: “Anọgidere m na-arịọ Jehova ka o nyere m aka. Nwunye nwa m gwaziri m na o nwere mgbakọ a ga-enwe n’obodo anyị. Agbalịrị m gaa otu ụbọchị n’ime ụbọchị ndị e nwere mgbakọ ahụ. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ na alọghachikwutela m ndị Jehova. Mgbakọ ahụ dị nnọọ ka ihe m na-eche kemgbe ka o nyere m aka ibidokwa fewe Jehova. Ugbu a, m jikwa obi ụtọ na-efe Jehova otú m na-emebu. Ndụ m enweekwala isi. O dokwuola m anya na ịhapụ ụmụnna m agaghị abara m uru. Amatakwala m na enyemaka ha dị m mkpa. M na-ekele Jehova maka na o nyeere m aka ịlọghachikwute ya ugbu a oge ka dị.”
Olee otú i nwere ike isi bịaruo Jehova nso ma ghara ikwe ka nkà na ụzụ, ahụ́ ike, ego, na nganga megharịa gị anya?